Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalyahanka Daacisha oo Xoogaga Kurdida Suuriya Isu Dhiibay.
Dagaalyahanka Daacisha oo Xoogaga Kurdida Suuriya Isu Dhiibay.
Posted by Dayr	/ March 7, 2019
Boqolaal ka tirsan dagaal yahanka Daacish ee ka dagaalamayey Suuriya ayaa isu dhiibay xoogaga Kurdida ee SDF oo hada ku hareeraysan tuuladii ugu danbeysay ee weli ku jirta gacanta kooxdaasi xagjirka ah.
Xoogaga Daacish oo hada ku jira go’adoon dhinac walba ah ayaa difaacoodii ugu danbeeyey uga jira tuulada Baghouz oo ka tirsan gobalka Deir-Az-Zor oo saaran xadka Suuriya iyo Ciraaq.
In ka badan 2000 oo qof ayaa Arbacadii shalay ahayd isu dhiibay xoogaga kurdida ee SDF, dadkaasi oo isaga soo baxay tuulada Baghouz ayaa waxaa ku jiray 400 maleeshiyaadka Daacish ah oo ay wehliyaan caruur iyo haween badan.
Saraakiisha SDF ayaa sheegay in weli tuuladaasi ay ku sugan yihiin maleeshiyaad badan oo Daacish ah oo iyagu diiday inay is-dhiibaan xili uu ku socdo duqeyn dhanka cirka iyo dhulka ah. Waxaa horey gacanta xoogaga Kurdida ugu jiray in ka badan 800 maxaabiis laga qabtay Daacish oo ay ku jiraan kuwo badan oo heysta dhalashada dalalka Yurub.